CFA vs. FRM - Iza no tsara Certification? [It's a Close Call!]
CFA vs FRM: Iza no tsara Certification?
23 Aug CFA vs FRM: Iza no tsara Certification?
Posted at 22:50h in Alternate Articles ny Bryce Welker, CPA 0 Comments
Updated:Oktobra 21, 2018
FRM dia CFA na ho an 'ny Asa Tsara Kokoa?
Inona no atao hoe CFA?
Inona no atao hoe FRM?
CFA vs FRM: Certification Mora
CFA vs FRM: karama
Noho izany, Iza no tsara ho anareo:?
Izany no iray amin'ireo matetika indrindra nanontany fanontaniana izay tsy maintsy manao mpianatra, rehefa manapa-kevitra ny hanitarana ny asa ao amin'ny fitantanam-bola. Zava-dehibe ny safidy, satria isaky ny certifications mitaky be dia be ny asa mafy, ny vola sy ny fotoana. Ny safidy dia mety ho sarotra raha toa ka tsy mahatsapa ny fahasamihafana fototra. Ny voalohany indrindra amin'ny CFA samy hafa sy ny FRM certifications no lohahevitra izay nanarona. CFA manarona malalaka lohahevitra isan-karazany eo amin'ny fitantanam-bola toy ny orinasa Finance, portfolio-fitantanana, fitantanam-bola, fidiram-bola raikitra, ary Sampanteny. Etsy ankilany, FRM dia manokana amin'ny fitantanana doza. koa, CFA manomana anao amin'ny fampiasam-bola ho an'ny asa banky, portfolio-fitantanana, fikarohana ara-bola. Ny FRM dia mifanaraka ho an'ireo izay te-hanao asa iray amin'ny fitantanana ny loza amin'ny banky, sampan-draharaha na amin'ny fandatsahan-drakitra doza fanombanana.
CFA mijoro for nanofa Financial Ny Mpikaroka sady toy ny taratasy fanamarinana ny alalan 'ny CFA Nahazo Institute. CFAs ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ny fampiasam-bola fitantanana. Malaza sasany anaram-boninahitra asa natao ny CFAs ahitana portfolio-mpitantana, fikarohana mpandalina, sy ny fampiasam-bola mpiasan'ny banky. Koa izy ireo mazàna miasa amin'ny orinasa fitantanam-bola.
FRM mijoro ho Financial doza Manager sady toy ny taratasy fanamarinana natolotry ny Global Fikambanan'ny doza Professionals. FRM GARP sy ny taratasy fanamarinana dia fantatra iraisam-pirenena. FRMs hanombana ny loza fikambanana sy hanana tetika mba hampihenana na offset izany. Izy ireo dia hita miasa amin'ny banky, fikambanana, pananana fitantanana orinasa, sy ny governemanta.
Mba ho CFA, dia tsy maintsy misoratra anarana ao amin'ny fandaharam-natolotry ny fanamarinana ny CFA Institute. Mba hisoratra anarana ao amin'ny fandaharana, dia mila ny efa-taona ambaratonga na mitambatra ny fanabeazana / asa traikefa ary telo-nitranga iray manarona ampahany fanadinana ireto lohahevitra manaraka ireto:
ny hitsiny fampiasam-bola
Mitaky ny 300 ora ny fotoana fianarana ambaratonga nitranga tsirairay ny CFA fanadinana. koa, mba handray ny sata mifehy, mila manana tongotra efatra taona ny asa mifandraika traikefa ambany CFA. Tsy maintsy ihany koa ho mpikambana ao amin'ny CFA Institute.
Raha te ho lasa FRM, tsy maintsy mandalo ny fanadinana ampahany roa-tantanan'ny ny Global Fikambanan'ny doza Professionals (GARP) nandrakotra ny lohahevitra manaraka:
Value amin'ny doza
Mila izany matetika FRM kandidà, fara fahakeliny, 150 ora hianatra fanadinana isaky ny ambaratonga sy GARP FRMs mamporisika mba handray 40 ora ny fanabeazana mitohy isaky ny roa taona. Raha ny GARP no tsy mba niantso manokana na inona na inona mari-pahaizana efa-taona ambany indrindra fitakiana na ny isan'ny ora bola, mba hanao asa eo amin'ny fitantanana ny loza dia ilaina ny manana mari-pahaizana licence. Mba hahazoana na fanamarinana, miomana ny vola be ny fotoana amin'ny fianarana sy ny fanadinana fanomanana.
Tena fanaon'ny fa CFAs manana fahafahana bebe kokoa noho ny FRMs asa noho ny fianarana sy fahaiza-manao ny sakany, indrindra amin'ny toerana pitantanana. CFAs misahana ny fitantanana sy ny maximizing mafy ny fampiasam-bola, izay afaka nandatsaka ny harato lehibe asa-hendry. CFAs matetika miasa amin'ny fefy vola, fampiasam-bola ireo banky, Fitantanam-bola sy ny orinasa manao fampiasam-bola banky, portfolio-fitantanana, sy ny hitsiny fikarohana. Etsy ankilany, FRMs dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fandinihana manokana mety sy mahafantapantatra hoe fomba manamaivana izany ao anatin'ny orinasa na ny portfolio-. FRMs matetika mihazona ambaratonga mpitantana sy ny mpanatanteraka izay mifantoka amin'ny toerana mety sy ny fampiasam-bola doza.
The CFA fanadinana manana indray mandeha fandaharana saran'ny fisoratana anarana ny $450. Ny saram fanadinana tanteraka isaky ny ambaratonga matetika vidiny $930. CFA kandidà dia afaka manantena ny vola $1,100 ny $1,700 mba hahazo ny sata. Mba handray ny fanadinana FRM, mila mandoa $400 saran'ny fisoratana anarana ho fanampin 'ny vola lany amin'ny fanadinana tsirairay. Part I vola lany $875 ary Part II vola lany $475. Afaka manantena mba handoavana $1,050 ny $1,500 ho lasa FRM. Pass ny tahan'ny ho an'ny fanadinana ao amin'ny 40 isan-jato isan-karazany.
Karama na inona na inona asa dia miankina amin'ny ny asa lohateny, taona ny traikefa, sy ny toerana. CFAs dia afaka mahazo ny karama eo $45,000 ary $180,000 isan-taona eo amin'ny toerana miankina, traikefa, sy ny orinasa. Ny FRM ny karama isan-karazany dia tena mitovy amin'ny CFA karama isan-karazany. FRMs matetika mahazo $50,000 ny $165,000.
Samy fanondroana ireo koa hajaina manerana izao tontolo izao, ary tsy misy tsara noho ny hafa. Fotsiny izy ireo samy hafa. Raha ny CFA fanendrena dia mivelatra kokoa ao amin'ny votoatiny sy mifantoka mafy amin'ny fampiasam-bola, ny FRM specializes amin'ny fanombanana sy ny fitantanana ny mety fikambanana. Ny fanapahan-kevitra eo amin'ny roa tanteraka miankina amin'ny toerana sy ny zavatra mahaliana mandainga izay Mahafinaritra manao bebe kokoa. Raha te-hianatra bebe kokoa momba ny CFA tsara indrindra Prep taranja you can go here. Tsy misy antony ianareo tsy afaka ny hanana na. Izany dia miankina amin'ny izay tianao hatao amin'ny asa. Ny tena lojika Ohatra noho ny manana na ny CFA sy FRM fanamarinana is if you are a CFA and would like to specialize in risk management. Tsarovy, ny FRM fanendrena dia fomba manokana kokoa noho ny CFA. Noho izany, mety ho mahasoa ny manana roa. Manoro hevitra aho fa hijery izay tianao hatao amin'ny asa ka hitondra ny iray. Ary rehefa afaka manomboka ny asa, dia afaka manapa-kevitra raha mety ho mahasoa ny hanenjika iray hafa.
Ampitahao Top FRM Courses
Ampitahao The Best CFA Coursess
Mpiara-miombon'antoka amin'ny Us
Best CPA Review Courses ny 2018
Big 4 Accounting orinasa Salary Misaraka
Policies sy ny Disclosure
Ahoana no laharana ny Courses